मन्त्री आलेले पहिलो बलमै हाने छक्का, विरोधीहरुले समेत गर्न थाले मुक्तकण्ठले प्रशंसा ! – GALAXY
मन्त्री आलेले पहिलो बलमै हाने छक्का, विरोधीहरुले समेत गर्न थाले मुक्तकण्ठले प्रशंसा !
काठमाडौं, २५ असोज । नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले पहिलो बलमै छक्का हान्ने संकेत गरेका छन् । उनले दिएको निर्देशनको विरोधीहरु समेत प्रशंसा गरेका हुन् ।
उनले नेपाल वायु सेवा निगमलाई तत्काल ई–टिकटिङ लागू गर्न निर्देशन दिएका छन् । हिजो (आईतबार) मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको मन्त्रालय एवं अन्तर्गतका निकायका प्रमुखहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री आलेले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले नेपालको ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमबाट प्रदान गरिने सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिए । उनले भने, “नेपाल वायु सेवा निगमबाट प्रदान गरिने सेवाहरू नागरिकले छिटोछरितो जानकारी लिनका लागि सेवाहरू विद्युतीय माध्यमबाट जानकारी दिनसक्ने गरी व्यवस्था गर्नुस्, निगमबारे सबैले नागरिकले जानकारी पाउन सकुन”,
निर्देशनकै क्रममा मन्त्री आलेले नेपालको एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक विमान सेवा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताए । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर यसको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नसमेत मन्त्री आलेले आग्रह गरे ।
सो कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले नेपाल वायु सेवा विमानको खस्किदो अवस्था भएकाले उक्त अवस्थालाई माथि उकास्न लागि ठोस पहलकदमी चाल्नुपर्ने बताए ।